Maskaxda B | Isbarasho super ah oo adduunka dib loo rogay
Ku dar Skip to Content
Boorkeenii raali noqo! Mob-ka Mob wuxuu sameynayaa cusbooneysiin inta aad daalacanayso!
Waa maxay Super Introvert?
Si fudud loo noolaado
Kalid & Shukaansi
Caafimaadka & Is-daryeelida
Maskax & Caadifad
Fayoobaanta & Jirrada
Daryeelka Timaha Curly
Ku noolaanshaha iyo jacaylka sida qarsoodiga ah ee xasaasiga ah uguna rogaya adduunyada la rogay
Mawaxaad raadineysaa Wax? Raadi wax oo garaac galaan.
Si fudud loo noolaado Kali iyo Shukaansi
Bartamihii 30-naadkii, Dheddig, Kali iyo Cajiib
Waxa ugu dambeeya ee aan damacsanaa inaan sameeyo ayaa ahaa inaan dib u bilaabo bloggeyga aniga oo ku qeylinaya bog kale. Laakiin markii aan arkay cinwaanka maqaal Vogue.com lagu wadaago Twitter toddobaadyo ka hor, buskudkaygu aad buu u gubtay. "Sideen Ku Noqday Qofka Ugu Dambeeyay Ee Kooxdayda ah?" Aka, “Mid-30s and Single: Miyaan Sugay Aad U Dheer to
Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka Isbarasho Super
Maalmaha Hoose iyo Sida loola macaamilo
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin. Waan necbahay maalmo. Waa maxay maalmaha hoos u dhaca? Maalmaha hoose waa waqtiyada aad madaxaaga ka gasho wax yar oo doqonimo ah. Waxaa laga yaabaa inaad wax ku ilowday dukaanka raashinka, hadana waxaad ku daaheysaa xaflad. Ama waxaa laga yaabaa inuusan saaxiib ku soo wicin markii aad dareentay inaad u baahan tahay tiradooda…
Waxa ugu Weyn WALIGE
Waxa ugu Weyn WALIGE # 1: GreenBeauty
Sanadkii la soo dhaafay, wadnaha karantiil ee COVID-19, waxaan si ka badan abid ugu soo galay ilaha internetka ee daryeelka timaha dabiiciga ah. Joogitaanka guriga xaqiiqdii waxay i siisay waqti dheeri ah oo aan sidaas ku sameeyo, waanan ogaa inaanan keli ahayn. Saaxiibada, qoyska, dadka la shaqeeya, fagaarayaasha khadka tooska ah - ku dhowaad dhammaan timo-soo-saarayaasha aan ka warqabo waxay go'aansadeen inay qufulladooda u koraan ugu yaraan…
Sheeko la'aan & Dulqaad
Soo Celinta Blog-ka (waa Sannad Wanaagsan!)
Salaan, dhammaantood, iyo farxad, Sannad Wanaagsan! Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen isku raaci karno inaanan si gaar ah uga niyad jabin aragtida 2020. Laakiin yaa garanaya – malaha qaarkeen baa jira. Waan ogahay inaan dhamaanteen u hanqal taagayo inaan dib u dhigno 365-kii maalmood ee la soo dhaafay, laakiin inaan hubino inaan xusuusanno sababta aan ugu faraxsanahay soo bixitaanka sanadka cusub,…
Maskaxda B ee Shaqada Qaar La Qabtay – Marlabaad
Waxaan ka dhigi doonaa tan dhakhso leh oo wasakh ah. Si wada jir ah, dhamaanteen waxaan soo marnay hal dhibic sanad ilaa hada 2020. Shaqsi ahaan, waxaan qiyaasi karaa oo kaliya waxa aad dhamaantiin ku wada socotaan – iyo dareemid, dhamaan waxyaabaha dhacaya. Aniga naftayda, waxay ahayd cacophony maskaxeed, shucuur, iyo jaangooyooyin jireed oo badan for
Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka Sheeko la'aan & Dulqaad
Waxaan jeclaan lahaa in wuxuushku joogsadaan
Habeenkii labaad oo xiriir ah ayay dhacday. Markan, waxaan taagnaa jikada aan kala tashanayey gurigeyga Google inta aan si nabad ah ugu dhalaali karo hilibka ceyriin heerkulka qolka kahor intaanay bakteeriyadu bilaabmin. Xilliga shiishka, digniinta feejignaanta dadweynaha ay jabisay shaashadda qufulan ee taleefankayga casriga ah markii ay fadhiday qolka fadhiga, waxaan ...
Waxyaabaha Dabiiciga Ah Ee Timahayga Nacaybku (Adiguna Waad Adkaan Kartaa)
Okay, okay – marka kani ma aha qoraalka ugu xiisaha badan ama ugu firfircoon barta lagu soo noqdo socodka. Si kastaba ha noqotee, si aad ah ayey iigu habboon tahay aniga hadda. Inta lagu jiro waqtigan markaan joogo guriga waa mid waxtar u leh nafteyda iyo qofkasta oo kale, waxaan haystaa waqti badan oo aan ku milicsado habka aan ku noolahay. Asxaabteyda iyo qoyskeygu waa…
Caafimaadka Maskaxda iyo Dareenka Si fudud loo noolaado
Farxada Maalinta Haweenka Adduunka !!!
Waxaan jeclaan lahaa in aan ka fikiro in Waqtiga Keydinta Maalinta Iftiinka uu ahaa mid u xiiso badan sida inteena kale si aan u bilowno maalintan quruxda badan - maanta halkaasoo (in kasta oo ay tahay inaan maalin kasta u dabaaldegno) aan si rasmi ah ugu dabaaldegno haweenka meel kasta oo ay joogaan. Dumar ahaan, waxaan marwalba la halgamayay aqoonsigayga - taasi waa, sidee ku noqon karaa haweeneyda ugu wanaagsan ee aan noqon karo? Miyaan isku dayaa…
Kali iyo Shukaansi
Siyaabaha Aan Taariikhayno
Sideen kuu jeclahay? Bal aan tiriyo waddooyinka. Elizabeth Barrett Browning Waxay ahayd inaan xaqiiqsado waqti hore in kaliya wax waalan ay dhacaan 11-ka habeenimo. Aniga ahaan, waxaan isku dayayay inaan ku furo finalka furaashka cabirkiisu le'eg yahay boqorad ahaan irridda hore, anigoo sugaya mid ka mid ah saaxiibbaday inuu ii yimaado shaqada ka dib oo uu i caawiyo…
Is-daryeelid Si fudud loo noolaado
2020: Sannadka Xallinta iyo Is-beddelka
Halkan guji si aad si toos ah ugu aaddid sanadka 2020 ee “xalliya”! Waa muujin xiiso leh in sifiican loogu garto qaangaarnimadaada inaad tahay qof aan badalin, shaqsiyan-caqli badan, laga soo bilaabo markii aad ahayd cunug. Haddii aad si hagaagsan u ahayd ilmo ahaan, adoo si dabiici ah u dhigaya alaabada aad ku ciyaarto ka dib ciyaarta, waxaad u badan tahay inaad weli ku raaxaysato macaan inaad nadaafaddaas ku ilaaliso your
Ku soo dhawoow Maskaxda B
Magacaygu waa Brandee. Waxaan ahay qoraa, saxafi madax-bannaan, iyo jilaa cod oo hammi leh. Waxaan sidoo kale ahay qof dareen badan, dareen leh, iyo qof is dhex geli kara nooca ugu sarreeya.
Blog-kani waxa uu ka warramayaa farxaddayda iyo halganka aan ugu jiro in aan helo isu-dheellitirka nolosha sidii qof dumar ah oo Afrikaan-Maraykan ah oo xiise u leh hal-abuurka, caafimaadka dhimirka, iyo daryeelka timaha dabiiciga ah, iyada oo aan daacad ka ahay "introversion super".
Ahaanshaha Super Introvert
Ayurveda iyo Nidaamkayga Timaha
Waxaa laga yaabaa 20, 2012
FictionSheeko la'aan & DulqaadQoraalka
5 (Wanaagsan) Cilmiga suugaanta ee 200 Bog
Sheeko la'aan & DulqaadQoraalkaIsbarasho Super
Waxyaabaha Feejignaanta ah ee Ahaanshaha Dad Daawasho
Si fudud loo noolaadoKali iyo Shukaansi
Sida Looga Fogaado Inaad Doqon U Noqoto Burbur
Xusuusta Muddada Dheer (Archives)
Xusuusta Muddada Dheer (Archives) Select Month Janaayo 2021 (2) Juun 2020 (2) Laga yaabaa 2020 (1) Maarso 2020 (2) Janaayo 2020 (1) Nofeembar 2019 (2) Oktoobar 2019 (4) Sebtember 2019 (5) Luulyo 2019 (2) Juun 2019 (2) Laga yaabaa 2019 (3) Janaayo 2019 (4) Diisambar 2018 (3) Nofeembar 2018 (3) Oktoobar 2018 (2) Sebtember 2018 (5) Heemaal Staff Ogosto 2018, 4 Luulyo 2018 (3) Juun 2018 (2) Laga yaabaa 2018 (3) Heemaal Staff Ogosto 2017, 2 Heemaal Staff Ogosto 2016, 1 Luulyo 2016 (1) Laga yaabaa 2016 (1) Abriil 2016 (1) Sebtember 2015 (3) Maarso 2015 (2) Heemaal Staff Ogosto 2014, 1 Juun 2014 (1) Abriil 2014 (2) Maarso 2014 (1) Janaayo 2014 (1) Nofeembar 2013 (2) Oktoobar 2013 (7) Febraayo 2013 (1) Janaayo 2013 (1) Oktoobar 2012 (1) Sebtember 2012 (7) Heemaal Staff Ogosto 2012, 6 Luulyo 2012 (1) Juun 2012 (1) Laga yaabaa 2012 (3) Abriil 2012 (1) Maarso 2012 (2) Febraayo 2012 (6) Diisambar 2011 (1)
Arkiifiyada "On Writing"
Ma waxaad raadineysaa qoraallo hore oo qoraal ah iyo qoraallo la xiriira buugga? Guji sawirka.
ka baqa inaad faraxsanaato (4) ka baqa in la qoro (5) naagaha kelida ah ee laga cabsado (3) nidaamka timaha ayurvedic ee bilowga ah (4) noqoshada qoraa (6) ahaanshaha qof fiican (7) faraxsan (10) daryeelka timaha duuban (6) la dhaqanka shucuurta (9) wax ka qabashada nacaybka (4) Ma dadka aniga oo kale ah (3) Maalmaha hoos u dhaca (3) qoraal bilaash ah (7) timaha 4c (8) tilmaamaha koritaanka timaha ee timaha dabiiciga ah (4) dareen diidmo oo aad u xasaasi ah (5) sideen ku farxi karaa (5) sideen hurdo badan u heli karaa (3) Waan jeclahay timahayga (5) Waan jeclahay qoraalka (13) waxyi qoris (3) qoraal adag (4) Waxaan rabaa inaan faraxsanaado (3) jacayl lumay (3) jacaylka imtixaanka luqadda (3) jecel baloog (7) maskaxda b (19) jacayl seegay (3) timaha dabiiciga ah (10) timaha dabiiciga ah (3) nabada maskaxda (5) aamusnaanta (14) naag kali madow (3) waddo axad (4) qarsoodi sare (9) kii baxsaday (3) isku dayaya inuu wax walba hagaajiyo (4) miyaan weligay timo bixi doonaa? (3) barta qoraaga (6) daaweynta qoraaga (4) Qoraalka caawinaadiisa (3) dhaqan celinta qoraha (3) qoraal (7) qorista naftayda (9) qoraal degdeg ah (8)
Kusoo Biir Maskaxda!
Ka hel qoraalo cusub sanduuqaaga sanduuqa markii ay ku daabacaan goobta!
Iisoo Raac Instagram-ka!
© Copyright 2022 Maskaxda B. All Rights Reserved. Blossom Pin Pro | Soosaaray Mawduucyo Ubax. Waxaa suuro galiyay WordPress.